QM oo eedeysay mucaaradka Suuriya - BBC Somali - Warar
QM oo eedeysay mucaaradka Suuriya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 6 Mey, 2013, 10:52 GMT 13:52 SGA
Carla del Ponte waa khabiir ka tirsan Qaramada Midoobay
Baare xuquuqda aadanaha oo ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa sheegay in ay jirto caddeyn in hubka kiimikada ay isticmaaleen mucaaradka dalka Suuriya.
Carla del Ponte ayaa sheegtay in marqaati ay bixiyeen dad dhibaato soo gaartay iyo dhakhaatiir shaki xooggan ka bixiyay - inkasta oo aanay jirin caddeyn aan la beenin karin - ee ah in gaaska sarin ay isticmaaleen dagaalyahanniinta mucaaradka.
Ms del Ponte meesha kama aanay saarin suurtagalnimada in ciidanka dowladda ay iyaguna isticmaaleen hubka kiimikada.
Mareykanka iyo Britain ayaa sheegay inay jirto caddeyn in xoogagga daacadda u ah Madaxweyne Basha al-Asad ay suurtagal tahay inay isticmaaleen hubkaasi.
Ruushka ayaa ku booriyay dalalka reer Galbeedka in aanay siyaasadeyn arrinta.